Efa manana ny toerana ofisialy Galaxy Unpacked | Androidsis
Efa manana toerana ofisialy Galaxy Unpacked izahay
daniplay | | Finday, Samsung
Samsung dia manafana sahady hanambara ny sasany amin'ireo vokatra stellar manomboka rahampitso amin'ny 16:00 hariva - ora Espaniola - ao amin'ny Galaxy Unpacked. Ny orinasa koreana dia manapa-kevitra ny hanome topy maso kely antsika amin'ny endrika horonantsary topi-maso vokatra dimy farafaharatsiny, finday roa ao anatin'izany ny Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy Tab S7 amin'ny karazany roa, Galaxy Watch 3 sy Galaxy Buds Live TWS.
Amin'ity clip vaovao ity dia mampiseho ny endrik'ilay marika vaovao Samsung Galaxy Note 20 izany dia hahatratra maodely telo isan-karazany, takelaka roa vaovao, headset hifaninana amin'ny fomba iray amin'ny Apple's Air Pods, famantaranandro caliber lehibe ary ny fanavaozana ny Fold, telefaona misy efijery roa.
1 Ny fandrakofana tsara indrindra an'ny Galaxy Unpacked
4 Samsung galaxy watch 3
Ny fandrakofana tsara indrindra an'ny Galaxy Unpacked
Rahampitso amin'ny 16:00 hariva no hatolotray ny fandrakofana tsara indrindra an'ny hetsika Galaxy Unpacked an'ny Samsung amin'ny Androidsis miaraka amin'ireo vaovao rehetra lazainay etsy ambany kely. Misy vokatra dimy farafahakeliny, telefaona roa, takelaka iray, famantaranandro ary headphone hahafeno ny filan'ny mpanjifa rehetra.
Ny fantatray dia ny mpanamboatra hanambara kinova telo antsoina Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy Note 20+ ary Samsung Galaxy Note 20 Ultra, smartphone miaraka amina processeur Snapdragon 865 sy Exynos 992, RAM 16 GB farafahakeliny, batterie 4.500 mAh, efijery AMOLED QHD + 6,87-inch ary S-Pen tafiditra ho fenitra.
Vonona izy hisarika ny sain'ny Hetsika Samsung »Galaxy Unpacked«Hanao izany amin'ny anarana Samsung Galaxy Fold 2 ary mikasa ny hitarika ny varotra an'ny orinasa. Ny processeur dia mikendry ny Snapdragon 865, 12 GB RAM, ny iray amin'ireo takelaka dia 6,23 santimetatra, 256/512 GB RAM, ankoatry ny tombony hafa.
Ny smartwatch dia hiseho amin'ity hetsika ity izay amin'ny Internet manomboka amin'ny mitataovovonana, ary be ny zavatra tokony hatao ny Samsung Galaxy Watch 3 vaovao. Hisy maodely roa, ny iray 1,2 "ary ny iray 1,4", ny iray hafa dia hisy RAM 1 GB, fitehirizana 8 GB, lozisialy Tizen OS ary bateria 340 mAh.
Hanaraka ity hetsika ity ny headphones miendrika tsaramaso tena zava-dehibe izy ireo, hisarika ny sain'ny maro izy ireo amin'ny alàlan'io loko varahina io toa ny Galaxy Note 20. Ireo headphone tsy misy tariby ireo dia hanana fanafoanana tabataba, fampifanarahana amin'ny Bluetooth 5.1, habe latsaky ny 3 cm ary azontsika atao ny mamehy azy ireo amin'ny boaty
Modely roa farafahakeliny antsoina hoe tablety Samsung Galaxy Tab S7 miaraka amin'ny modely Galaxy Tab S7 sy Galaxy Tab S7 +. Ny processeur namboarina dia kendrena ho Snapdragon 865+, RAM 6/8 GB, fitehirizana 128/256 GB, fakan-tsary roa misy any aoriana, eo aloha ary bateria 7.560 mAh miaraka amina vidiny 15W haingana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Efa manana toerana ofisialy Galaxy Unpacked izahay
Mampitahainay ny Pixel 4a vaovao miaraka amin'ireo mpifanandrina aminy ambany noho ny 500 euro
Brawlhalla sy ny ady amin'ny sehatra marobe an-tserasera misy ankehitriny amin'ny findainao